Golaha Maanka oo Kulan Dagdaga ka Yeelan Doona Xaalada Tigray – Rasaasa News
Jijiga – June 29, 2021 – Britain, Mareykanka iyo Ireland waxay ku baaqeen in shir deg deg ah Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, kaas oo dhici kara Jimcaha, ilo diblomaasiyadeed ayaa sidaas sheegay.
Golaha Amnigu wuxuu ku guuldareystay inuu qabto kulan guud oo ku saabsan arrimaha Tigreega tan iyo markii uu dagaalku qarxay, iyada oo dalal badan oo Afrikaan ah, Shiinaha, Ruushka iyo dalal kale ay u arkeen kaliya dhibaatada ka jirta gudaha Itoobiya.
Intii dagaalku socday oo dhan, Abiy wuxuu ka faa’iideystay taageerada askarta deriska la ah ee Ereteriya iyo gobolka Axmaarada Itoobiya, oo xuduud la leh Tigray.
Ku lug lahaanshaha ciidamadan “waxay sii murjiyeen codsiga xabad joojinta ku meel gaardhka ah, oo illaa iyo hadda u muuqata inay tahay tallaabo inteeda badan ay qaadday dowladda federaalka,” ayuu yiri Connor Vasey, oo ah falanqeeye ka tirsan la-talinta halista ee Eurasia Group.
Haddii wadahadallada ku saabsan heshiis siyaasadeed oo suurtagal ah ay si dhab ah u socdaan, waxay “u badan tahay inay noqdaan kuwo adag oo sii dheeraanaya”, ayuu yiri Vasey.
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa Talaadadii ku boorrisay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan xabad joojinta waxayna ku celisay baaqii ahaa in ciidamada Ereteriya ay ka baxaan Itoobiya.